Esi budata egwu na iPhone n'enweghị iTunes
Mgbe ndị ọrụ buru ụzọ hụ ngwaahịa Apple, ha dị ntakịrị, dịka ọmụmaatụ, mgbe ha na-eji iTunes. N'ihi eziokwu ahụ bụ na iOS dị nnọọ iche na ntanetị ndị ọzọ, ndị ọrụ na-enwekarị ajụjụ banyere otu esi emezu nke a ma ọ bụ ọrụ ahụ.
Njehie 7 (Windows 127) na iTunes: akpata na ịgba akwụkwọ
Ọ bụ ITunes, karịsịa ma a bịa na Windows version, bụ usoro a na-apụghị ịgbagha agbagha, nke ọtụtụ ndị ọrụ na-ahụ mgbe ụfọdụ ihe ụfọdụ. Isiokwu a na-atụle njehie 7 (Windows 127). Dịka iwu, njehie 7 (Windows 127) na-amalite mgbe iTunes malitere ma pụtara na usoro ahụ, n'ihi ihe kpatara ya, mebiri emebi na enweghị ike ịmalite ọzọ.
Ụzọ maka ịmehie njehie 11 na iTunes
ITunes bụ usoro a ma ama, n'ihi na ọ dị mkpa ka ndị ọrụ na-achịkwa nkà na ụzụ apple, bụ nke a ma ama n'ụwa nile. N'ezie, ọ bụghị ndị ọrụ niile jiri usoro a jiri obi ụtọ, ya mere, taa, anyị ga-atụle ọnọdụ mgbe koodu nhiere nke 11 na-egosipụta na window iTunes.
Nchọpụta nsogbu Error 50 na iTunes
Njehie na iTunes bụ ugboro ugboro na, n'ụzọ doro anya, na-adịghị mma. Ọ dabara na, ọ bụla njehie na-esonyere ya koodu, nke dịtụ simplifies usoro nke iwepu ya. Isiokwu a ga-atụle njehie 50. Njehie 50 na-agwa onye ọrụ na enwere nsogbu na ịnweta iTunes multimedia faịlụ site na iPhone.
Otu esi tinye fim na iTunes
ITunes bụ otu mgbasa ozi na-ewu ewu na-enye gị ohere ịrụ ọrụ na egwu abụọ na vidiyo. Na mmemme a ị nwere ike ijikwa kọmputa gị Apple-Ngwa, dịka ọmụmaatụ, na-agbakwunye ha ihe nkiri. Mana tupu ị nwee ike ịnyefee vidiyo gaa na iPhone ma ọ bụ iPad, ịkwesịrị itinye ya na iTunes. Ọtụtụ ndị ọrụ, na-agbalị ịgbakwunye vidiyo na iTunes, na-eche eziokwu ahụ na ọ dabaghị n'usoro ihe omume ahụ.
Otu esi emelite iPhone, iPad ma ọ bụ iPod site na iTunes na "n'elu ikuku"
Imelite usoro sistemụ nke ngwaọrụ Apple bụ ihe dị mkpa iji hụ na ọrụ dị mma ma dị irè. Mmezi dị mma, ike ịbawanyewanye elu, na-eweta ihe ndị dị na iOS dịka mkpa nchekwa dị elu - nke a na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-enye site na mmelite mgbe niile.
Esi weghachite paswọọdụ ID ID na iTunes
Apple ID bụ akaụntụ kachasị mkpa ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ Apple. Ihe ndekọ a na-enye gị ohere ịnweta ọtụtụ ndị ọrụ ala: akwụkwọ ndabere nke ngwaọrụ Apple, ịzụta ihe mere eme, kaadị akwụmụgwọ ejiri, ozi nkeonwe na ihe ndị ọzọ. Kedu ihe m nwere ike ikwu - na - enweghị njirimara a ị nwere ike iji ngwaọrụ ọ bụla site na Apple.
Otu esi agbanwe asụsụ n'asụsụ iTunes
Apple bụ ụlọ ọrụ a ma ama nke ụwa nke a ma ama maka ngwaọrụ ndị a ma ama na ngwanrọ dị elu. N'inye ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ ahụ, a sụgharịrị ngwanrọ nke si n'okpuru nku nke ngwa ngwa apụl gaa n'ọtụtụ asụsụ nke ụwa. Isiokwu a ga-atụle otu esi agbanwe asụsụ n'asụsụ iTunes.
Ngwọta maka Jikọọ na iTunes iji ọkwa ọkpụkpọ
Ọ bụ ezie na adịchaghị ezu, nsogbu dị iche iche pụkwara ibili na ngwa Apple. Karịsịa, anyị ga-ekwu banyere njehie nke na-egosi na ihuenyo nke ngwaọrụ gị dịka ozi "Jikọọ na iTunes ka ị jiri nkwupụta push." Dịka iwu, "Jikọọ na iTunes iji ọhụụ push" njehie na-apụta na ntanye nke ndị ọrụ nke ngwaọrụ Apple n'ihi nsogbu na ịtọ ntọala na akaụntụ Apple ID gị.
Enweghị ngosi na iTunes. Kedu otu esi edozi nsogbu ahụ?
Ndị ọrụ niile, na-enweghị otu, ndị nwere ngwaọrụ Apple, mara ma jiri iTunes. N'ụzọ dị mwute, iji usoro ihe omume ahụ anaghị aga n'ihu. Karịsịa, n'isiokwu a, anyị ga-elebakwu anya n'ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na egosighi ngwa na iTunes. Otu n'ime ụlọ ahịa Apple kachasị mkpa bụ Store Store.
Esi weghachi ego maka nzụta n'ime otu ụlọ ahịa iTunes
Ụlọ ahịa Apple kachasị ukwuu - Ụlọ Ahịa Store, Ụlọ Ahịa IBook, na Ụlọ Ahịa iTunes - nwere ọtụtụ ọdịnaya. Ma ọ dị mwute ikwu, dịka ọmụmaatụ, na Ụlọ Ahịa App, ọ bụghị ndị mmepe niile na-akwụwa aka ọtọ, n'ihi ya, ngwa ma ọ bụ egwuregwu ahụ enwetaghị ederede na nkọwa ahụ. Ego a tụfuru na ifufe? Mba, ị ka nwere ohere ịlaghachi ego maka ịzụta.
Ụzọ iji dozie njehie 39 na iTunes
N'oge mmezu nke usoro maka imelite ma ọ bụ weghachite ngwaọrụ Apple na iTunes, ndị ọrụ na-ahụkarị ezighị ezi 39. Taa, anyị ga-ele ụzọ ndị bụ isi ga-esi enyere ya aka. Njehie 39 gwara onye ọrụ na iTunes enweghị ike ijikọta sava Windows.
Dịka iwu, ọtụtụ ndị ọrụ chọrọ iTunes ịgbakwunye egwu site na kọmputa na ngwaọrụ Apple. Mana ka music wee dịrị na ngwaọrụ gị, ị ga-ebu ụzọ tinye ya na iTunes. iTunes bụ otu mgbasa ozi mgbasa ozi na-ewu ewu nke ga-aghọ ngwá ọrụ magburu onwe ya iji mepụta ngwa apụl na ịhazi faịlụ mgbasa ozi, karịsịa, nchịkọta egwu.
Esi ewepu egwu na iTunes
ITunes bụ ngwá ọrụ n'ezie iji rụọ ọrụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ngwaọrụ Apple. Dịka ọmụmaatụ, site na iji usoro a, ị nwere ike belata egwu ọ bụla. Isiokwu a ga-atụle otú e si arụ ọrụ a. Dị ka a na-achị, a na-eji ụda egwu a na iTunes mee ihe ụdaolu, n'ihi na oge ụdaolu maka iPhone, iPod na iPad ekwesịghị igafe 40 sekọnd.
ITunes bụ usoro a na-ewu ewu nke chọrọ iji ngwaọrụ Apple na kọmputa. O di nwute, mmemme a enweghi ihe di iche iche site na oru ya (karia na kọmputa ndi na-agba Windows), oru di elu na onu ogugu nke onye o bula mara. Otú ọ dị, àgwà ndị yiri ya nwere iTunes.
Adịnyela iTunes na kọmputa gị: ihe kpatara ya
ITunes bụ software na-ewu ewu nke ihe mgbaru ọsọ ya bụ ịchịkwa ngwaọrụ Apple ejikọrọ na kọmputa. Taa, anyị ga-ele anya n'ọnọdụ ebe a adịghị etinye iTunes na Windows 7 na n'elu. Ihe kpatara njehie nwụnye iTunes na PC. Ya mere, ị kpebiri ịwụnye iTunes na kọmputa gị, mana ị na-eche eziokwu ahụ na usoro ihe omume ahụ anaghị etinye.
Apple ama amaghi nani maka ngwaọrụ ya di elu, kamakwa maka nnukwu ulo ntanetị nke na-ere ngwa, egwu, egwuregwu, ihe nkiri na ihe ndi ozo. N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya na usoro ị ga - ewe ma ọ bụrụ na i nweta ya / /bill payment receipts, ọ bụ eziokwu na ị nwetaghị ihe ọ bụla.
Error iTunes kachasị elu
Ọ bụrụ na ịchọrọ ijikwa ngwaọrụ Apple gị site na kọmputa, mgbe ahụ ị ga-eji iTunes. N'ụzọ dị mwute, karịsịa na kọmputa na-agba Windows, usoro a enweghị ike ịnya isi maka nkwụsi ike dị elu, nke ọtụtụ ndị ọrụ na-ahụ mgbe niile na njehie na mmemme nke usoro ihe a.
ITunes abụghị naanị ngwá ọrụ dị oke mkpa maka ijikwa ngwaọrụ Apple site na kọmputa, kamakwa ngwá ọrụ magburu onwe ya maka idebe ọbịbịa egwú gị n'otu ebe. N'iji usoro a, ị nwere ike ịhazi nnukwu mkpokọta egwu gị, ihe nkiri, ngwa na ọdịnaya ndị ọzọ.